विदेश बाट पैसा पठाऊदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको विनिमय दर ! - बैदेशिक पोष्ट
विदेश बाट पैसा पठाऊदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको विनिमय दर !
माघ ६, २०७८ ११;५९ बिहान प्रकाशित
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम ११८ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्री दर ११९ रुपैयाँ ३९ पैसा कायम गरेको छ ।
1 118.79 119.39
1 134.70 135.38
1 161.67 162.49
1 129.69 130.35
1 85.53 85.96
1 95.17 95.65
1 88.06 88.51
10 10.37 10.42
1 18.71 18.81
1 31.67 31.83
1 32.63 32.79
1 3.60 3.61
1 32.34 32.50
1 28.33 28.47
100 9.98 10.03
1 13.01 13.07
1 18.10 18.19
1 15.24 15.32
1 392.84 394.82
1 315.13 316.72